Tari-dalana Toriteny Alahady 09 Aprily 2017 (Alahadin’ny SAMPANDROFIA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 09 Aprily 2017 (Alahadin’ny SAMPANDROFIA)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny perikopa izay ho toriana manerana ny Sahan’ny FLM amin’ny ALAHADIN’NY SAMPANDROFIA, 09 Aprily 2017 ho avy izao. Mirary soa indrindra tompoko.
Alahadin’ny SAMPANDROFIA, i.e., fankalazan’ny Fiangonana ny niakaran’i Jesosy amim-boninahitra tany Jerosalema ity andro ity (ampit. and. 12–16). Fanehoany ny fahatanterahan’ny faminanian’ny Testamenta Taloha ny amin’ny maha-Mesia araka an’Andriamanitra mba hitondra ilay Fanjakam-piadanana Eskatolojika amin’ny fahafenoany Azy izany. Araka ny fomban’ny Mpanjaka mpandresy (ny fihobiana sy fandrakofana sampan-drofia sns. ny làlana) no niakarany tao Jerosalema, izay midika fa ny Fanjakana izay ho entiny dia Fanjakan’ny mpandresy. Mizotra tsikelikely koa ho eo amin’ny hazofijaliana (fahafatesany sy fitsanganany tamin’ny maty) anefa izany diany izany, i.e, Fanjakan’ny fandresena ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly izany. Izany no mitondra ny tena fiadanana na ny fandriampahalemana tanteraka ho an’ny vahoaky ny Fanjakany.
Mialoha izany fiakarany tao Jerosalema izany dia nandalo tao amin’ny fianakaviana izay akaikin’ny fony sy famantanany matetika Izy (and. 1–11). Nohosoran’i Maria menaka manitra Izy tamin’izany. Inona no hevitra symbolikan’izany araka ny fikendren’i Jaona izay nanoratra ny Filazantsara? Tsara ho marihina fa vanim-potoana ankatoky ny PASKA izay hanaovana fanatitra sy ihinanana “ny zanak’ondry tsy misy kilema” no anehoana ny tantara (jereo Jao. 11:55 sy 12:1). (1) Araka ny Eks. 25:6 dia fanatitra ankasitrahan’YHWH ny menaka manitra izay fanosorana. Ny fanosorana menaka an’i Jesosy àry dia fanondroana Azy ho Ilay Fanatitry ny Paska tena ankasitrahan’YHWH (ampit. Jao. 1:29: Zanak’Ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao). (2) Izany menaka izany koa no nampiasaina tamin’ny fanosorana ireo Mpisorona na ny Mpanjaka (Eks. 28:41; 29:7, 21, 29; 1 Sam. 16:12–13; 2 Sam. 2:4; 5:3). Fampiharihariana ny maha Voahosotr’i YHWH an’i Jesosy na ny maha Mesia Azy koa no hevitra symbolikan’ny fanosorana Azy menaka manitra eto.
Raha aravona izany dia izao: fampifamatoran’i Jaona ny maha Fanatitra ankasitrahan’YHWH sy ny maha Mesia Azy no hevitra symbolikan’ny fanosorana Azy menaka eto. Ny Mesia, na ILAY VOAHOSOTRA mba hitondra ny tena Fanjakam-piadanana ity miakatra any Jerosalema ity. Amin’ny alalan’ny fanaterany ny tenany eo amin’ny hazofijaliana no hitondrany izany. I.e., ny fahafatesana sakrifisialin’Ilay Voahosotra sy ny fitsanganany tamin’ny maty amin’ny andro Paska no mitondra ny tena fiadanana (fiainana mandrakizay) ho an’ny vahoaky ny Fanjakany.
Ny fiarahany nisakafo farany tamin’ireo akaikin’ny fony dia fampiombonany ny fiainan’izy ireo Taminy amin’izany. Ary ny olona miombona Aminy amin’izany no ho vahoak’izany Fanjakam-piadanana na Fanjakan’ny fiainana mandrakizay izany. Tsy Marta sy Maria ary Lazarosy ihany, tsy ny mpianany 12 lahy ihany fa isika rehetra koa dia ampiomboniny amin’ny tenany amin’ny alalan’ilay sakafon’ny Alakamisy Masina. Ny hiombonantsika Aminy amin’ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty ka hananantsika ny FIADANANA na FIAINANA MANDRAKIZAY avy Aminy ao amin’ny Fanjakany no anton’izany. Aoka ho tena fiombonana ary ho tena fiainantsika mandrakariva izany dia ho isan’ny vahoak’Ilay Fanjakam-piadanana amin’ny fahatanterahany mandrakizay koa isika.
Ho an’Ilay Mpanjakan’ny Fiadanana mandrakizay anie ny voninahitra. Amena.